Ronaldo iyo Messi Midna Kuma Guuleysan Doono Xiddiga Adduunka, Waa Sannadkii Koobka Adduunka – Cadalool.com
Ronaldo iyo Messi Midna Kuma Guuleysan Doono Xiddiga Adduunka, Waa Sannadkii Koobka Adduunka
Lionel Messi iyo Cristiano ayaa si isle’eg u qaybsaday abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan dunida ee Ballon d’Or tobankii sannadood ee ugu dambeeyey, welina waxay ku ku jiraan murashaxiinta loo saadaalinayo inay hantiyi doonaan sannadkii 11aad oo xidhiidh ah, hase yeeshee weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe ayaa sheegay in xiddigahani aanay sannadkan calfan doonin.
19 jirkan ku guuleystay Koobka Adduunka, ayaa qaatay waqti wanaagsan oo uu ku noqon karo ciyaartoygii ugu horreeyey muddo toban sannadood ah ka guuleysta Messi iyo Cristiano, ayaa waxa uu xusay in uu doonayo in abaalmarinta sannadkan la guddoonsiiyo mid ka mid ah ciyaartooyadii Faransiiska u horseeday Koobka Adduunka, sidaana ay ku soo afjaranto sannadihii xidhiidhka ahaa ee labada nin ee illaa hadda taagan.
“Haddii aan anigu ku guuleysanao, ma garanayo, laakiin ugu yaraan waxa aan la doonayaa ciyaaryahannadayadii. Anigu wax walba oo karaankayga waan sameeyey illaa maalintii ugu dambaysay codbixinta, mana qoomamayn doono, wixii iiga soo baxaana waa abaal-marin.” ayuu yidhi.
Mbappe oo 21 gool u dhaliyey PSG xili ciyaareedkii tegay ayaa raaciyey afar gool oo Koobkii Adduunka ahaa, kuwaas oo sabab u noqday in dalkiisu ku guuleysto.
Dhinaca kale, Mbappe waxa uu xusay in Ronaldo iyo Messi aanay shaqadooda oo kale cidina qaban karin, hase yeeshee aanay sannadkan hantiyi doonin Ballon d’Or, waxaanu yidhi: “Qofna ma samayn karo xilligan wax ka wanaagsan Ronaldo iyo Messi, mana odhan karno waa dhamaadka waayahoodii sababtoo ah uma dhamaanayso marka qof kale uu wax ka wanaagsan sameeyo. Laakiin ilama aha in midkoodna ku guuleysan doono Ballon d’Or sannadkan sababuna waa sannadkii Koobka Adduunka, waxaana mudnaanta leh Koobka Adduunka.”
Mbappe waxa kale oo uu qiray in marka ciyaaryahanno ahaan loo eego aanay cidina gaadhi karaynin Messi iyo Ronaldo, waxaanu yidhi: “Haddii aad qaab-ciyaareedkooda eegto, ma jirto cid ka wanaagsan, sannadkana iyagaa ahaa labada ugu wanaagsan. Messi wuxuu ahaa dhaliyaha ugu wanaagsan Yurub; Ronaldo na wuxuu ahaa dhaliyihii ugu badnaa Champions League.”